Portable fractional co2 icebo eliphethe umtha wokukhanya omninwaname izixhobo scar mole yolulela marko nokususwa umatshini cl-100-icebo eliphethe umtha wokukhanya omninwaname ubuhle umatshini-Hunan Astiland Zonyango Aesthetics Iteknoloji Co., Ltd.
Inkqubo ye-CL-100 Fractional CO2 laser inkqubo yonyango isebenzisa itekhnoloji ye-microprocessor-control, isebenzisa isikrini sokuchukumisa se-LCD njengeqonga lokudibana kwekhompyuter, ukuxhobisela ukusebenza kobuntu. Ezi ziphucula inkqubo yokulawula yonke inkqubo.
Iingalo ezisixhenxe ezichaziweyo (inkqubo yokuhambisa ukukhanya) yenza ukuba yonke inkqubo yokukhupha i-laser ibe nekhwalithi elungileyo yesikhokelo kunye nokuxinana kwamandla. I-CO2 yomsebenzi we-laser yomsebenzi we-irradiation ubekwe nge-diode ejolise kwisixhobo se-laser, esonyusa ukhuseleko kunye nolawulo lwenkqubo.
Olu luchungechunge luxhotywe ngomsebenzi wokuphuma kwezinto eziphucukileyo: inokunikezela ngeendlela zokwenza amandla okuskena kunye nokuskena okungahleliwe phantsi kwendlela yokusebenza. Inkqubo elawulwa nge-microprocessor kunye ne-scanical optical eyenziweyo yenza ukuba iziphumo ze-laser lattice, imilo kunye nobunzima zihlengahlengiswe ukwakha iindlela ezahlukeneyo, ezenza ukuba unyango lube lula kwaye lujolise ngakumbi. Itekhnoloji ekhethekileyo yokulawulwa kokukrekhwa elawulwa ngokungekho mthethweni iqinisekisa ukuba zonke iindawo zonyango zinexesha elaneleyo lokuphola, zithintele ukwenzakala kwesikhumba okubangelwa kukuqokelela kobushushu ngexesha lonyango, kwaye kuncipha ngomgangatho wempembelelo efanelekileyo ngelixa kusonyuswa isiphumo sonyango.
Ukuvuselela ulusu, ulusu kwakhona
Iipores, iipores ezinkulu
Ithoni yolusu, imhlophe
Susa imibimbi, ukuqinisa, ukuqinisa
Susa zonke iintlobo zamabala (amabala, ukutshisa, utyando lwelifa, umothuko, amanqaku olulelo)
1.Seven iingalo ezidibeneyo, umphumo ungcono, uzinze ngakumbi
Iintlobo ezimbini zenkqubo yokupholisa, qinisekisa ukuba icandelo ngalinye linowona msebenzi mhle ngexesha lomsebenzi,
gcina impumelelo efanelekileyo kwaye wandise ixesha lokuphila.
I-3.Glass tube, ukupholisa umoya + inkqubo yokupholisa amanzi
Imowudi ye-4: Iintlobo ezintandathu zemifanekiso ekhuphayo, nika umntu isigulana unyango
5.Imowudi yoSasazo: Unyango lokuhlinzwa
Uhlobo lwe laser
Iglasi Tube Fraction co2 laser
Uqhaqho kunye ne-Fractional, (ukhetho lwe-Vaginal cartridgeges)
Inkqubo yesikhokelo sokuKhanya
Izixhobo ezisixhenxe eziHlangeneyo
Ivelength ye Laser
Ukujongisa ukukhanya kwe-wave waveth
I-0.1mm * i-0.1mm ukuya kwi-20mm * 20mm
I-8.0inch enemibala echukumisayo yokuchukumisa isikrini.
Isikwere, Unxantathu, uHexagon, Isangqa, Oval, Unxantathu
Umzimba wo bunzima